PDF reading, Editing & Converter softwares - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
PDF reading, Editing & Converter softwares
24-03-2007, 01:51 AM
ဟော ..လာပါပြီခင်ဗျာ ..မနေ့က ကျွန်တော် Application တောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ
ပြောထားတဲ့ ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင် ပြောင်းနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ ခင်ဗျ ..
Word to PDF converter 1.0 with Serial Number
ဒီဟာလေးကတော့ Setup ဖိုင်လေးပါ ခင်ဗျ။
ဒါလေးကတော့ သူ့အတွက် Serial Number လေးပါ
အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ လို့ ..
Last edited by Aung Aung; 19-08-2008 at 04:50 PM.. Reason: title change
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ရခိုင်သားလေး, ရန်မျိုးအောင်, လမ်းပြကြယ်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, azp09, bothu, kohtaykyawe, Lwin Thu, Phoekwarlay, phoetharlay, thura.it, viva, Win Htay Lwin
PDF ကနေ MS Word ကိုပြောင်းပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးတည့်ကြမှာပါ။ happy
Registration key: 370783914547D6C48895
Last edited by tu tu; 24-02-2009 at 10:04 AM.. Reason: လင့်ခ်ဖြည့်ရန်
စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ထင်ပေါ်လေး, နီထွန်းဦး, ရခိုင်သားလေး, ရန်မျိုးအောင်, ရဲထွတ်, မေဦးမွန်, မောင်ဘိုတောက်, မောင်သံသရာ, Kyaw Nay Soe, thureinsoe, viva, Win Htay Lwin
AdultPDF Split/PDF Merge v2.5
VeryPDF Split-Merge v3.0
Last edited by tu tu; 02-04-2010 at 08:31 AM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
ထင်ပေါ်လေး, ဖန်ဆင်းရှင်, ရခိုင်သားလေး, ရန်မျိုးအောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, Aung Aung, AZM, tu tu, Win Htay Lwin
ABBY PDF converter version 1.0 ညီလေး ငြိမ်းချမ်း တောင်းထားတာပါ။ တခြားသူတွေအတွက်လည်း
အသုံးတည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ uploaded.to ကနေ တင်တာ မရတာနဲ့ mega နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရန်မျိုးအောင်, မောင်သံသရာ, Win Htay Lwin
Re: ABBY PDF Transformer
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇော် ..ယူလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။
15-10-2007, 10:06 AM
FoxitReader က open source နည်းပညာတစ်ရပ်ပါ .. သူက pdf file ဖြစ်တဲ့ adobe reader တစ်မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ် .. သူရဲ့အားသားချက်ကတော့ notepad ကိုဖွင့်သလောက် ပေါ့ပါးခြင်းပါဘဲ .. adobe reader ရှိတဲ့စက်တိုင်းမှာ FoxitReader ကို run နိုင်ပါတယ် .. လုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ zip file ကိုဖြည်ချလိုက်ပါ .. ဖြည်လို့ရတဲ့ folder တစ်ခုလုံးကို ပီစီရဲ့ hard-drive တစ်နေရာမှာ ကော်ပီထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ .. folder ထဲမှာရှိတဲ့ FoxitReader.exe file ကို double click နဲ့ run လိုက်ရုံပါဘဲ .. အလွန်ပေါ့တဲ့ pdf တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်
16-10-2007, 02:11 AM
ဒေါင်းလို့မရလို့ လုပ်ပါအုံးဂျာ ကိုပူတူးရေ................................................
16-10-2007, 09:49 AM
ဟုတ်ကဲ့ ကိုရွှေသိန်းရေ .. ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီး ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ ..
ခုတလော .. မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်တာနက်ကြီးက သိတဲ့အတိုင်းဘဲဗျို့ ..
17-10-2007, 04:29 AM
ရပါတယ်ဗျာ။ အေးဆေးပေါ့။ နေကောင်းလားဗျ။ ဟဲဟဲ...........
17-10-2007, 07:43 AM
ဒါက Portable version ပါ။
ဒါက Installer free version...
ဒါကတော့ Professional version အတွက်ကီးဖိုင်ပါ။
FoxitReader ရဲ့ Help -> Install License Key ကိုရွေးပြီး ကီးဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ စာသားအားလုံးကို ကူးထည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် အပိုလုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို ရပါပြီ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မင်းခကို, မောင်သံသရာ, amaung344, nandarnaing007@gmail.com
ငပိုင်လေး .. ကျေးဇူးဟာ .. ကျွန်တော့် mediafire အကောင့်က ဘာဖြစ်နေသလဲ မသိဘူး .. upload တင်တဲ့ file တချို့က တင်ပီး ပြန်ချရင် file not found ဆိုပြီး error တတ်နေလို့ .. ဘာဖြစ်နေတယ် မသိဟာ .. အဲဒါ .. file hosting ကောင်းကောင်းတစ်ခုလောက် ထပ်ရှာနေတာမို့ .. မတင်ဖြစ်သေးတာပါခင်ဗျာ .
18-10-2007, 03:44 AM
ကျေးဇူးဗျာ ကိုပိုင်။ ဒေါင်းတော့ဒေါင်း ပြီးပြီ ဒါပေမယ့် မသုံးရသေးဘူး.........................
Last edited by tu tu; 24-02-2009 at 10:11 AM.. Reason: လင့်ခ်ဖြည့်ရန်
Rapidshareနဲ့ အဆင်မပြေ သူများအတွက် MEDIAFIREနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်......
ကိုဂျစ်တူးခင်ဗျာ mediafire နဲ့တင်ပေးထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ rapidshare နဲ့က ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ကိုမရဘူးဗျာ။ တခြားသူတွေက ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒါနဲ့တင်နေကြတာလဲဗျာ။ ခက်မှန်းမသိလို့လား။ တခြား reason များရှိပါလားဗျာ။ (မသိလို့မေးတာပါ)
ဒီဖိုရမ်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး အားလုံး နီးပါးက မြန်မာကပါ။ သူတို့အတွက် ဒီလင့်လေး ရဖို့တောင် မနည်းရှာရတာ။ ညီလေးက မြန်မာက ဆိုရင် သိမှာပါ။ ဒီတော့ အဲဒီ့ဖိုင်းကို ဒေါင်းလုဒ်ချ ၊ ပြီးတော့ မီဒီယာဖိုင်းယားက ပြန်တင်ဖို့ဆိုတာ သူတို့ အင်တာနက်သုံးရတဲ့ အချိန် ၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်း စတာတွေနဲ့ တွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မာက ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လို့ရတဲ့ ဆိုက်တွေက တင်ပေးဖို့ ပြောထားသလို တင်လည်း တင်နေကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက အဲဒီ့ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုဒ်ချ ၊ ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင် ဆာဗာတစ်ခုဝယ် ၊ အဲမှာ တင်ထားလိုက်။ အဖျက်လဲ မခံရတော့ဘူး။ မြန်မာအားလုံးလည်း ကြိုက်တဲ့ အချိန်ဒေါင်းလုဒ် ရမယ်။ အဲလိုစီစဉ်ချင်တာ ။ ငွေအားက မတတ်နိုင်ဘူးဗျ။ နားလည်ပေးလိုက်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုရဲနောင် ပြောသလိုပဲ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက် သုံးရတဲ့နှုန်းနဲ့ သုံးရတဲ့ အချိန်ကြောင့် သူတို့မှာ အပ်လုတ်လုပ်ပေးဖို့ အချိန်မရနိုင်တာပါ။ Mediafire တို့ဘာတို့မှာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကျတော့ မြန်မာပြည် အပြင်ဘက်မှာ သုံးခြင်းကြောင့် အချိန်နဲ့မြန်နှုန်းရှိပါတယ် ဒါကြောင့် ကျနော်လည်း ဒေါင်းရတဲ့လူတွေ အဆင်ပြေအောင် Mediafire တို့၊ Mega တို့ကနေတင်ပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် Mediafire ကအခုတလော ဖိုင်ကြီးကြီးတွေ တင်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျကျနေလို့။ အဆင်ပြေကြပါစေ.......
28-12-2007, 07:46 AM
PDF reading & Editing softwares
Nitro PDF Professional 5.3.1.8 လေးပါ။
PDF ဖိုင်ကနေ Word ဖိုင်ပြောင်းရာမှာ ကောင်းပါတယ်။
Last edited by Aung Aung; 01-11-2008 at 08:30 AM.. Reason: လင့်ပြင်ခြင်း
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ kothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖယောင်း, တေလေငှက်, မောင်သံသရာ, bonge, monkaunglay, zo
Very PDF Image2PDF v 3,2 OCR Version
Image ကနေ pdf ပြောင်းပေးတဲ့ software လေးပါ။ သုံးလို့ ကောင်းပါတယ်။
serial : 18YP9R8PWCXNO892P
Last edited by tu tu; 05-01-2010 at 06:21 PM..
စစ်မာန်, စစ်တွေသားချေ, amaung344, monkaunglay, nyinyi mt, Win Htay Lwin
31-12-2007, 04:52 AM
အသုံးပြုပုံလေး ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
Win Htay Lwin
31-12-2007, 05:05 AM
ကျွန်တော်ဒါက်ို ပထမဆုံး သုံးဖြစ်တာ က ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်က ဓါတ်ပုံဖိုင်တွေ ဖြစ်နေလို့ ဒီဆော့ဝဲလေးသုံးပြီး pdf ဖိုင်ကို ပြောင်းတာပါ။
ပြီးတော့ တခါတလေ ကျရင် တချို့ စကင်ဖတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေက ဆိုဒ်အရမ်းကြီးနေရင် pdf ကနေ jpg ကို software တစ်ခုခုသုံးပြီးပြောင်း ပြီးရင် အဲဒီ jpeg ဖိုင်ကို အပေါ်က ဆော့ဝဲသုံးပြီး pdf ပြန်ပြောင်းရင် စာအုပ်ကို ဆိုဒ်သေးအောင် ချုံ့လို့ရတယ်။
ဒီနည်းက စာအုပ်တိုင်းတော့ အလုပ်မလုပ်ဘူးနော် ။ ကျွန်တော် ဂျူးရဲ့ ကျွန်မ၏သစ်ပင် စာအုပ်ကို ချုံ့တာ အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ နည်းအတိုင်းပါဘဲ ။
ကျွန်တော့်အထင်တော့ jpeg ဖိုင်ကို ပြောင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ jpeg ဖိုင်တွေအားလုံးရဲ့ စုစုပေါင်းဖိုင်ဆိုဒ်ကို မူလ pdf ဖိုင်ရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လို့ သိသိသာသာငယ်သွားပြီဆိုရင် တော့ အဲဒီဓါတ်ပုံ ဖိုင်တွေကို pdf ပြန်ပြောင်းရင်လည်း မူလဖိုင်ထက် ပိုငယ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကို pdf ပြောင်းလို့ ထွက်လာတဲ့ ဖိုင်က ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးပေါင်းနဲ့ အရွယ် မတိမ်းမယိမ်းရှိတယ်။
ဒါက ကျွန်တော်သုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကိုပြောတာပါ။ ဒီဆော့ဝဲကို တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လည်း သုံးလို့ရအုံးမှာပါ။
Last edited by Aung Aung; 31-12-2007 at 05:21 AM..
မောင်သံသရာ, Win Htay Lwin
31-12-2007, 05:11 AM
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုအောင်အောင်ရေ ...နားလည်သွားပြီဗျာ ...လက်တွေ့လေးလုပ်လိုက်
ပါဦးမယ်ဗျာ ...နောက်ကိုလဲ တင်ပေးပါဦး ..အိုကေ ...
ကျွန်တော်ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ။ အများအားဖြင့်တော့ image ကနေ pdf ဖိုင်ကို ပြောင်းရင် ebook လုပ်ချင်ရင်တော့ image ဖိုင်တွေအားလုံးကို pdf ဖိုင်တစ်ခုထဲဖြစ်အောင် ပြောင်းရမှာပါ။ အဲဒီလိုပြောင်းတာမှာ ပြောင်းရမယ့် image ဖိုင်တွေရဲ့ စုစုပေါင်းဆိုဒ်ကြီးရင်ကြီးသလို တော်တော်ကြာပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကဘဲ နှေးလို့လားမသိဘူး ။ ဒီဆော့ဝဲ ရခါစက ၆၀ မဂ်လောက်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံဖိုင်တွေ ကို ebook တစ်ခုထဲစမ်းလုပ်ကြည့်တာ နာရီဝက်ကျော်လောက်ကြာတယ်။ စမ်းမယ်ဆိုရင် ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသေးနဲ့ စမ်းပါ။ မဟုတ်ရင် ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ တော်တော်စောင့်ရပြီး စိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်။
Last edited by Aung Aung; 31-12-2007 at 05:44 AM..
31-12-2007, 06:10 AM
ကောင်းပါပြီ ကိုအောင် ..စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ် ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
31-12-2007, 07:50 AM
အစ်မလည်း အောင်အောင်ဂျူးစာအုပ်ပြန်ချုံ့ပေးကတည်းက အဲ့ဒီအကြောင်းသိချင်နေတာ။
31-12-2007, 08:17 AM
Very PDF to Image Converter version 2.1
pdf ကနေ image file type အမျိုးမျိုး ( jpg, tiff, gif,....) အစရှိသည်တို့ကို ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။
Last edited by tu tu; 13-11-2009 at 09:20 PM..
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဆန်းမောင်, မောင်သံသရာ
31-01-2008, 03:30 PM
Convert PDF files to MS Word or Excel or HTML or Text
PDF ဖိုင်ကနေ Ms word, Ms Excel, HTML, Text ဖိုင်များကို အလွယ်တကူပြောင်းနိုင် ပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ kothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, monkaunglay, Phoekwarlay
ပြန်စာ - Convert PDF files to MS Word or Excel or HTML or Text
Originally Posted by kothu
ုကိုတူ ရေ ..
မရဘူး.. ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့မရတာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကြယ်စင်မင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
13-02-2008, 09:27 PM
ကိုသူခင်ဗျား ဖိုင်က virusပါတယ်လို့ ပြောနေတယ်
ကျွန်တော်သုံးတာက kaspersky anti-virus 7.0 ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ nOv အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်မျိုးသာ, မောင်သံသရာ, Lwin Thu
converter များစုဝေးရာ(1) Ye Naung Applications 302 29-05-2018 10:13 AM
Converter များစုဝေးရာ - ၂ ဂျစ်တူး Applications 19 25-09-2010 11:41 AM
HTML To PHP Converter v4.2.1.8 Ye Naung Softwares များ020-03-2007 06:16 PM